Tonga nametraka fitoriana teny anivon’ny PPA Ampefiloha andro vitsy taorian’izay izy noho ny fanendahana izay nahazo azy. Very tamin’izany ny volany mitentina 1.000.000 Ar. Nanokatra fanadihadiana avy hatrany ny polisy. Nilaza moa ilay voaendaka fa miisa 6, tsy nisaron-tava no nanendaka azy ary olom-pantany ny 2 tamin’ireo. Nokarohina avy hatrany izy roalahy ka ny alahady teo tokony ho tamin’ny 06 ora maraina no voasambotra teny amin’ny faritra Ampefiloha iny ny iray. Nohadihadiana avy hatrany izy ary niaiky fa nandray anjara tamin’ny fanendahana ary nanondro ireo namany ihany koa. Mbola karohina kosa ireto farany. Naiditra am-ponja vonjimaika izy ny talata 25 febroary eo am-piandrasana ny fotoam-pitsarana azy.